Fijaliana azo na hazofijaliana… ho famonjena | NewsMada
Fijaliana azo na hazofijaliana… ho famonjena
Par Taratra sur 26/03/2016
“Vita“. Tenin’i Kristy teo amin’ny hazofijaliana io, tamin’ny nanolorany ny fanahiny, araka ny Jaona 19: 20, ohatra. Vita na tapitra ny ainy tamin’ny naha olombelona nofo sy ra Azy. Ilay Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Fa vita koa na tanteraka ny Famonjena tamin’izany. Tsarovana amin’izao andron’ny Paka na Paska izao…
Misy fetrany ny zava-drehetra, misy farany na vita. Rahoviana kosa vao hifarana izao fijaliana azo, sarin’ny lalan’ny hazofijaliana, iainan’ny vahoaka izao? Mba hitenenana indray andro any hoe vita… Tokony hisy vokany ny fiaretana sy ny fihafiana, na ho ela na ho haingana. Raha tsy izany, fampahoriana amin’ny tsy antony tsy antonona.
Fa mbola mandeha amina lalan-davitra sy sarotra ny vahoaka amin’izao, tsy azo antoka tanteraka akory aza hoe mitondra aiza… Miraparapa amin’ny kitsapatsapa lava? Tsy mazava na zary tsy mampiombona sy tsy ifampitokisana loatra intsony izay tena zava-dehibe, maika… Vokany, samy manana ny lalany na manao izay saim-pantany.
Izany no mahatonga ny tsy fandriampahalemana etsy sy eroa? Manjaka ny asan-jiolahy, herisetra… Tonga hatramin’ny fitsaram-bahoaka. Endriky ny tsy fanarahan-dalàna izay. Tsy fahamasahan’ny dina koa amin’izay faritra misy izany. Tsy hita be ihany izay handaminana ny raharaha rehefa tsy matoky mpitondra ny vahoaka?
Miara-dalana ho azy amin’izay tsy fanarahan-dalàna izay ny gaboraraka amin’ny fandrobana harem-pirenena, fanaovana kolikoly, fisian’ny tsimatimanota, ny fahalalana olona… Tena mitondra faisana amin’izany ny valalatsimandadiharona, karazana mitondra hazofijaliana na fijaliana no azo… Mandra-pahoviana? Mila famonjena.
Aiza ny olana? Na sakantsakana… Fepetra takin’ny mpira-miombon’antoka mandrakariva ny ezaka misimisy kokoa amin’ny hoe fanjakana tan-dalàna, fitondrana tsara tantana, ady amin’ny kolikoly, fanajana sy fiarovana zon’olombelona… Mba misy fitsanganana amin’izay ve ny amin’izany? Na famonjena ka ho vita ny fahantrana…
Hitondra inona eo amin’ny tsirairay izao Paka na Paska izao? Dimbiasan’ny fahatsiarovana ny andron’ny 29 marsa…